Famolavolana afisy sarimihetsika amin'ny Photoshop: The Sparrow Mena | Famoronana an-tserasera
El famolavolana afisy sinema dia tontolo mamorona iray manontolo izay anaovan'ny mpamorona hita taratra amin'ny iray amin'ireo lehibe haino aman-jery dokam-barotra izay mikendry ny hanompo ho toy ny singa sary an'ny fampiroboroboana ny sarimihetsika. Amin'ny alàlan'ny endrika sary samy hafa izay namboarina araka ny karazany resahintsika, dia tsy maintsy tratran'ilay mpamorona sary taratry ny votoatin'ny horonan-tsary amin'ny fomba izay manintona maso ary lasa emitter mankany amin'ny mpampiasa.
Tianay foana ny afisy sarimihetsika fa Inona no ao ambadik'izy ireo? Ahoana no fomba anaovany izany? amin'ity lahatsoratra andao jerena ny ampahany sary ao ambadiky ny mamorona afisy sarimihetsika. Ho hitantsika ny fomba mahary indray ilay afisy mampiasa Photoshop amin'ny fomba hafa hianarana ny fampiasana ity programa retouching sary ity. Tsy hifantoka izahay (farafaharatsiny mba io aloha lahatsoratra) mba hampisehoana ny ampahany matihanina ao ambadiky ny afisy fa hasehontsika ny fomba hamerenana ity poster manokana ity. Amin'ny ho avy lahatsoratra ho hitantsika ny fomba famoronana afisy manomboka amin'ny rangotra, miainga amin'ny ampahany amin'ny hevitra ka hatramin'ny famokarana nomerika. Raha heverinao fa lohahevitra mahaliana izy io dia aza misalasala mamela hevitra etsy ambany lahatsoratra.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika hanombohana ny famolavolana ny afisintsika dia mamorona antontan-taratasy vaovao en Photoshop miaraka amin'ny endrika A4 mahazatra.
Ao amin'io lahatsoratra hianarantsika hampiasa ity manaraka ity fitaovana:
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia manokatra sary hampiasainay amin'ny afisy. Raha te-hanao an'ity afisy ity dia tsy mila misafidy sary mitovy amin'ny afisy voalohany isika satria ny hianarantsika dia ny hianarantsika mamorona fomba io, tsy mitady handika amin'ny antsipiriany ny afisy izahay. Raha te-handika ny afisy isika dia tsy maintsy manao fotoan-tsary mitovy amin'ny sary voalohany.
Ho an'ity dingana manaraka ity Photoshop ny ataontsika dia ny manao a tapahina amin'ny sary, noho izany dia azontsika ampiasaina ny boribory polygonal. Azo atao ihany koa ny mampiasa ny gaoma na fitaovana fifantina hafa izay afaka manampy antsika hanapaka ny sary.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia fenoy ny any aoriana mena, noho izany dia tsy maintsy ataontsika maka santionany ny loko mena amin'ny afisy voalohany (tsindrio alt), azontsika atao io fomba samihafa: Podemos kopia ny soatoavina ny lokony ary ampio izy ireo amin'ny fototra vaovao, na azontsika atao maka santionany miloko ary avy eo ampiasao io swatch io ho toy ny fototra ho an'ny lokonay vaovao.
Safidintsika ny dropper ary maka santionany amin'ny loko mena amin'ny afisy voalohany izahay.
Raha vantany vao manana ny santionany voafantina isika, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia fenoy ny momba anay, noho izany dia mandeha amin'ny menio ambony izahay ary mifantina ny safidy Manova / mameno. Aorian'ny fanaovana an'io dia hisokatra ny varavarankely vaovao, hamaranantsika ny safidintsika loko.
Mampiasa ny efamira miloko izahay mba haka ny santionany faharoa rehefa misokatra ny varavarankely mifantina loko.
Rehefa avy nanova ny loko ambadika ho avy isika miasa miaraka amin'ny sary. Araka ny hitantsika amin'ny afisy tany am-boalohany, ny sary dia manana loko mena midorehitra toa ny ao ambadiky, azo tanterahina izany amin'ny alàlan'ny famoronana karazana fusion eo amin'ny sary sy ny sary. Mba hanaovana izany ao Photoshop ny sisa ataontsika dia ovay ny maody sosona manomboka amin'ny mahazatra ka hatramin'ny maro.
Efa vita ny fametahana ny afisintsika, ny zavatra sisa tsy hita ampio font akaiky araka izay azo atao sy asa vita.
Nianatra nampiasa isan-karazany izahay fitaovana an'ny Photoshop amin'ny fomba azo ampiharina rehefa manao a fanatanjahan-tena mahaliana mampiasa ny afisy sarimihetsika ho toy ny fototra. Ny afisy sarimihetsika dia tena mahaliana ho an'ny mpamorona tsirairay, ny hevitra hoe afaka mandray anjara amin'ity karazana endrika ity dia manintona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Famolavolana afisy horonantsary: ​​The Sparrow Mena
Ampahafantaro ireo olona manomboka mianatra famolavolana ireo boky ireo
Sary masina 5 izay hahafantaranao ny momba an'ity fampiharana ity alohan'ny hanokafany azy